Maxaad Noo Dooratay - Bariga Fog
Pioneer ee Warshadaha Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Qoray ee Biodegradable
1. Far East & Geotegrity waa soo saaraha ugu horeeya ee warshad makiinada miiska lagu farsameeyo fiber-ka dhirta ilaa iyo sanadkii 1992. Khibrad soddon sano ah oo ku jirta warshadda saxarada qalabka miiska wax lagu nadiifiyo ee R&D iyo waxsoosaarka, Bariga fog waa horyaal arimahan.
Waxaan sidoo kale nahay soo saare isku dhafan oo aan kaliya diirada saareynin tiknoolajiyada wax lagu nadiifiyo ee R&D iyo waxsoosaarka mashiinka, laakiin sidoo kale soo saare xirfadlayaal ah oo OEM ah oo ka sameysan weelka saxarka lagu nadiifiyo, hada waxaan wadnaa 200 oo mashiin oo guriga ah waxaanna dhoofineynaa 250-300 konteynar bishiiba in kabadan 70 wadamada guud ahaan 6 qaaradood.
2. Far East & Geotegrity waxay leedahay labadaba tamarta keydinta mishiinka otomaatigga ah iyo sidoo kale keydinta tamarta xoqida bilaashka ah ee feerka mashiinnada otomaatiga ah ee qaybta, waxaan bixinnaa kuleylinta saliidda iyo kuleylka korantada ee ikhtiyaarka macaamiisha.
3. Far East & Geotegrity waxay helayaan in ka badan 95 teknoolojiyad sharciyeysan oo ay ka mid yihiin tignoolojiyadda saliidda kululaynta tamarta iyo sidoo kale jarista tikniyoolajiyada bilaashka ah ee bilaashka ah ee caawineysa in la badbaadiyo 15% qiimaha wax soo saarka. Mashiinnada waa shahaado UL iyo CE. Hubinta waxqabadka mashiinkeenu waa: 50% keydinta tamarta, in ka badan 95% heerka waxsoosaarka dhammaaday, in ka badan nolosha adeegga ee 15-sano ee mashiinka iyo caaryada
4. Far East & Geotegrity waxay bixisaa adeeg dhan-hal-joogsi ah, oo ay ku jiraan 1-sano oo dammaanad mashiin ah, naqshadaynta injineernimada aqoon isweydaarsiga, naqshadeynta 3D PID, tababarka goobta ee warshadda iibiyaha, barashada rakibidda mashiinka iyo ku guuleysiga howlgelinta warshadda iibsadaha, dhammaatay hagida suuqgeynta wax soo saarka iyo wixii la mid ah.